Makapeti nengowani → Zvipfeko zvebasa • nyanzvi P & M machira emakomputa
Hondo uye tsandanyama dziri chikamu chemidziyo BHP inodikanwa kumabasa kuwedzera njodzi. Iwo hupenyu uye dziviriro yehutano.
Zvigadzirwa zviripo pm.com.pl zvinounzwa nevanozivikanwa vagadziri. Mhando dzakasiyana dzinokutendera kuti usarudze zviri nyore chimwe chinhu chakakodzera basa racho. Isu tinove nechokwadi chekugara tichipfumisa kupa kwedu nezvitsva zvigadzirwa.
Yedu yekupa isu takawedzera nemabhalaclavas anonyanya kubatsira munguva yechando, machira echimney, ngowani dzemubiki, kumeso nhoo, mesh caps yeindasitiri yezvikafu nevamwe. Kutenda kushandira pamwe kwevagadziri uye huwandu hwehuwandu hweodha, isu tinokwanisa kupa mitengo inokwezva uye yakasarudzika sarudzo, uye mamwe madhora kune akajairwa vatengi.
Chengetedzo ngowani, chengetedzo ngowani
Ngowani dzekunyaradza uye chengetedzo
Ngowani inogona kuchinjika kune zvaunoda sezvo iine zvinhu zvekugadzirisa zvinokutendera kuti uzvigadzirise kune zvaunoda. Kuchinjika kwakadai kwengowani dzinoshandura mukunyaradza uye chengetedzo.
Ngowani dzakasungirirwa zvisina tsarukano, panguva yekukanganisa, i.e. kubva kumusoro, inogona kutsvedza pasi, ichiisa musoro mukukuvara kwakakomba. Isu tinopa akawanda mamodheru mumarudzi akasiyana siyana. Izvo zvinhu zvinogadzirwa nengowani zvinopesana nemhedzisiro yakaipa yezvinhu zvekunze, uye hapana makemikari ane chepfu akashandiswa kuzviita.
Maketi ekudzivirira emwaka wega wega
Muchitoro chedu, tinopa zvakagadzirwa uye zvinonakidza kupfeka zvivharo zvekudzivirira mumatope akasiyana akakodzera mwaka dzakasiyana. Mumwaka wechirimo uye wezhizha, tinokurudzira machipisi emwenje anonyatso dzivirira kubva kune yakasimba mwaranzi yezuva.
Munguva yechando, kunyanya mukutonhora kwakadzika, ngowani dzinodziya dzinodzivirira kupisa kwemusoro zvakakwana. Tinokurudzira zvakanaka kune vanhu vanoshanda kunze mumamiriro ekunze akaoma. Tine vakadzi uye varume mamodheru ekusarudza kubva, ayo anobatsira kusarudzwa kwezvigadzirwa.
Kune avo vari kutsvaga maheu ekudzivirira akareruka akafanana nekopu ine visor, isu tine sarudzo yemamodeli kubva kuJSP neReIS vagadziri.
Saka chiedza ngowani ipa dziviriro yekutanga kubva kune zvinokanganiswa nezvinhu zvakaoma. Pakati pane muwedzero wakagadzirwa weHDPE kana ABS mapurasitiki ine yekuvhundutsa yekumwa sisitimu, nekuwedzera yakamisikidzwa nezvinhu zvekuwedzera nyaradzo.
Hondo vane maburi ekufefetedza, mabhanhire ekugadzirisa, uye homwe dzemukati dzinokutendera kuti ubvise chinoomesa, zvichikubvumidza iwe kusuka kapu kana kuita kumaka machira emakomputa.
Chiedza chekuchengetedza ngowani, yakasimbiswa nezvakarukwa
Reis yakadzivirirwa ngowani
machena macaps ngowaningowani dzebasashanda nguwani ine visornguva yebasa yechandobaseball nguwaningowani dzebasa dzechando dzevarumengowani dzebasa rechandongowani dzekuchengetedza basaMhiko yekuchengetedza helmetingowani dzekushandamavara anoshanda ngowaningowani dzekushanda olxuvex ngowani dzeheti